लकडाउनमा गुपचुप रहेको एउटा विभत्स ह’त्या, प्रहरी नै चकित! – KhabarTime
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको एक साता पुगेको थियो । त्यहीबेला गठ्ठाघर र बालकोटको सीमामा पर्ने हनुमन्ते खोला किनारमा युवतीको श’व भेटियो । तर टाउको थिएन, हात-खुट्टाका पञ्जा का’टिएका थिए । संवेदनशील अंग पनि विग्रिएका थिए । श’वको प्रकृति हेर्दा हुलिया नखुलोस् र प्रहरीका लागि कुनै सुराक नबचोस् भनेर श’व क्षतविक्षत पारिएको अनुमान लगाउन गाह्रो थिएन ।
हनुमन्ते करिडोर निर्माण भइरहेको ठाउँ आसपास क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा पनि छैन । केहीपर भएका क्यामराका फुटेज हेर्दा पनि प्रहरीले कुनै क्लू भेट्टाउन सकेन । सनाखत नभएपछि अनुसन्धानले समेत गति लिन सकेको छैन । हालसम्म घटनाबारे यकिन भएको एउटा मात्र तथ्य हो, युवतीको विभत्स ह’त्या भएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतले श’वको प्रकृति हेरेर बला’त्कारपछि ह’त्या भएको हुनसक्ने समेत आशंका गरेका छन् । तर श’व सडिसकेको अवस्थामा भेटिएकाले यकिन विवरण पत्ता लगाउन समस्या भएको छ । फरेन्सिक विज्ञानले पनि मृ’त्युको कारण ‘अनडिटरमाइन्ड’ भन्दै श’वको चोटपटकबारे मात्रै व्याख्या गरेको छ ।
फरेन्सिक विज्ञको टोलीले १७ देखि १९ वर्षकी महिलाको श’व भएको भनेको छ । श’व भेटिएको १० देखि १५ दिनअघि ह’त्या भएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ । अपराधस्थलमा केही दिन श’व राखेर मात्रै खोलामा फ्याँकिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘पहिल्यै ल्याएको भए, त्यहाँ आसपास काम गर्ने मजदुरहरुले श’व देखिहाल्थे’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् ।
घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरुसँग रहेको अर्को सूचना भनेको युवती ५ फिट २.३ इञ्चकी छन् र निलो सुरुवाल र कलेजी रङको कुर्था लगाएकी छन् । भक्तपुर प्रहरी परिसरले १७ चैतमा श’व भेटिएलगत्तै सनाखतका लागि ७७ वटै जिल्लामा हुलिया परिपत्र गरेको थियो ।
फरेन्सिक टोलीको निष्कर्ष अनुरुप फागुन महिनादेखि श’व भेटिएको समयसम्म हराएको भन्दै उजुरी परेका युवती मध्ये ८५ वटा घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरिसकेको छ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको खोजतलास डेस्कले पनि सहयोग गरेको छ । तर कुनै केश अनुसन्धानमा सहयोगी साबित भएन । बरु हराएका कतिपय युवती विवाह गरेर अन्य केटासँग बसिरहेको अवस्थामा फेला परे । कोही घरमा नभनी डान्स बारमा काम गर्न थालेपछि परिवारले उजुरी दिएको भेटिए ।
श’व भेटिएका स्थान आसपास काम गर्ने मजदुर, ठेकदारलगायत गरी डेढ सय व्यक्तिसँग प्रहरीले बयान लिइसक्यो । अनुसन्धानमा खटिएको टोली पनि पटकपटक फेरिएको छ ।
हाल घटनाको अनुसन्धानमा जुटिरहेका महाशाखाका प्रमुख दीपक थापा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान जारी राखिएको सुनाउँदै विस्तृतमा बताउन नसकिने बताउँछन् । श’वको सनाखतमा सहयोग गरिदिन उनको आग्रह छ । आमनागरिकलाई थापाको आग्रह छ, ‘फागुनदेखि चैतको समयमा कसैको छोरीचेली हराउनु भएको छ भने कृपया खबर गरिदिनुहोला । यसले ह’त्याका दोषीलाई पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ ।’
भक्तपुर प्रहरीकी एसपी तारादेवी थापा पनि महाशाखासमेतसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान जारी राखिएको बताउँछिन् । ‘केही आधारहरु भेटिएका छन् तर, ती सतप्रतिशत प्रमाणित नभई यकिनरुपमा बताउन मिल्दैन’, थापाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हाल अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक भइरहेको छ भन्न मात्र सकिन्छ ।’
थापाद्वयको कार्यकाल अघिकै अनुसन्धान अधिकृतले मृतकको टाउकोको खोजी पनि गरेका छन् । खोलाका हरेक कुनामा स्काभेटर प्रयोग गरेर खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि अनुसन्धान अधिकृतले अर्को शिराबाट छानबिन थालेका थिए ।
के हुनसक्छ ह’त्याको कारण ?
अनुसन्धान अधिकृतहरुका विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने युवतीको बला’त्कारपछि ह’त्या भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । संवेदशील अंगलाई पनि क्षतविक्षत बनाइएको हुनाले पनि यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।
श’वलाई जुन किसिमले व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यो हेर्दा दुई वा दुईभन्दा बढीको संलग्नता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । गाडीमा लगेर टाउको एकातिर श’व अर्कातिर फ्याकिएको हुनसक्ने अनुमान अधिकृतहरूको छ ।
मृ’त्युको केही दिनपछि मात्रै श’व खोलामा फ्याकिएको हुनसक्ने देखिएकाले युवतीको कुनै होटल, रिसोर्ट वा अन्यत्र ह’त्या भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर, घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरु भन्छन्, ‘सनाखत भए सबै कुरा सतहमा आइहाल्थे, परिचय नै नखुलेपछि समस्या भयो ।’
मन्त्री पुनको निर्देशनः मिटर रिडिङ नभएका कारण विद्युतका ग्राहकलाई जरिवाना नहोओस्